चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आएको छु - Sarokar Khabar
२३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
सामान्य जीवनशैलि अप्नाउदै आएका वडाअध्यक्ष हुन् टिकाबहादुर मोक्तान । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय नेता मोक्तान २०५१ सालमा नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता लिनुभयो । त्यस अघि पनि कम्युनिष्ट विचार सिद्धान्तलाई पछ्याउदै आएका मोक्तानले २०५३ सालमा नेकपा एमालेको संगठित सदस्य लिनु भयो । त्यस पछि पार्टीले उहाँलाई कमलामाई नगरकमिटी सदस्य, वडा कमिटि अध्यक्ष, क्षेत्रिय कमिटि सदस्य लगाएतका जिम्मेवारी काुशलतापुर्वक पुरा गर्नुभयो । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक निर्वाह गर्दै आएका मोक्तानलाई पार्टीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय ग¥यो । जस अनुसार कमलामाई नगरपालिका ८ मा नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका मोक्तान यतिवेला वडाको विकासमा होमिनु भएको छ । तीन बर्षमा उहाँले गर्नु भएका काम र आगामी कार्यक्रमका बारेमा तिनै वडा अध्यक्ष मोक्तानसंग गरिएको कुराकानी – सम्पादक ।
वडा अध्यक्ष भए पश्चात वडाको विकासमा के–के गर्नुभयो ?
मानिसलाई स्वास्थ्य अपरिहार्य कुरा हो । त्यैले आफु वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि शहरि स्वास्थ्य क्लिनिको स्थपना गरेको छु । साविक ३ नंं वडाको ठुलडाडा, पातिपरा, माईखोलाको शिरबाट सामान्य विरामी हुदा र बालबालिकालाई खोप लगाउन पनि भिमान वा सिन्धुली जानु पर्ने बाध्यता हटाएको छु । सवैलाई सेन्टर पर्ने गरी तिनतलेमा शरि स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन भई रहेको छ ।
कमलामाईको उद्गम स्थल पनि यसै वडामा पर्ने भएकाले मन्दिर, पोखरी, पुल निर्माण गरेका छौ । घर निर्माण गर्दा ढुंगा, गिट्टि, बालुवा बोकेर लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको ठाउमा अहिले सवै तिर मोटरबाटो बिस्तार गरेका छौ । सिद्धेडाँडा, ठुलडाडा, बगछेडा, ज्यामिरे लगाएतका विकट स्थानहरुमा सहजै रुपमा सवारी साधन चल्न सक्ने सडकहरु बिस्तार गरेका छौ । साथै कमला पुल देखी सर्लाहीको इश्वरपुर जोड्ने सडक विस्तार गरेका छौ । जहाँ दैनिक रुपमा बस सञ्चालन हुँदै आएको छ ।विकास र परिवर्तनमा शिक्षाको ठुलो भूमीका हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भएकाले गुणस्तरीय भौतिक संरचना निर्माण गरेका छौ । विद्यालयमा आवश्यक भवनहरु पनि निर्माण गरि रहेका छौ ।
कमलामाई नगरपालिकाको ८ नं. वडालाई ढाका उद्योगका रुपमा चिनाउन वडाले परिचय बनाउने काम गरेका छौ । वडा कार्यालयको समन्वयमा सहयोगी तथा साझेदार संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोगले उद्योग सञ्चालन, बजार व्यवस्थापन लगाएतका कामहरु गरि रहेका छौ ।
करकरे देखी हर्दिया सम्म भूईकटहरको व्यवसायिक खेती गरेका छौ । भुईकटहर खेतीका माध्यमबाट पनि स्थानीयलाई आय आर्जनमा जोड्ने काम गरि रहेका छौ । वडाको सुरु देखी अन्त्य सम्म कमला नदीले क्षती गरेको र पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न नसकेपनि आवश्यक पहल गरि रहेका छौ । साथमा खानेपानीको पहुँच नपुगेका वडाबासिलाई खानेपानिको पहुँचमा ल्याएका छौ । कमलामाई उद्गम स्थल र हातिसारमा पिक्निक स्थल निर्माण गरि रहेका छौ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक लगाएतका जनजिविकाका सवालमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु निर्माण गरि रहेको छु ।
चुनावि नारा के–के पुरा गर्नुभयो ?
चुनावको समयमा मैले गर्छु भनेका प्रतिबद्धताहरु धेरै पुरा गरी सकेको छु । कतिपय कामहरु देखिने छन् तर ति चुनावको प्रतिबद्धता भित्र त पर्दैनन् । किनकी काम गर्दै जाँदा यो चुनावि प्रतिबद्धता भित्र पर्दैन भनेर जनतालाई विकास बाट पछि पार्ने काम गर्न हुदैन् ।
मैले, विजुली, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका सवालमा मैले चुनावि दौडानमा बत्ति बाल्ने, खानेपानी खुवाउने, विरामी हुँदा डोलीमा बोकिनु पर्ने बाध्यता हटाउन सडक विस्तार गर्ने, सवैलाई पायक पर्ने स्थानमा खानेपानीको सुविधा दिने, स्वास्थ्य उपचारमा स्वास्थ्इ संस्था स्थापना गर्ने लगाएतका प्रतिबद्धता थिए । चुनावि नारा अनुसार सवै भन्दा खुसि लाग्ने काम भनेको वडामा विजुलि बत्ति बाल्ने काम गरेको छु । नगरपालिका स्थापना भएको २३ बर्ष सम्म पनि वत्ति नवलेको वडामा मैले बत्ति बाल्नेछु भनेर प्रतिबद्धता गरेको थिए । जुन मेरो कार्यकालभरिमा विजुली बत्ति बाल्छु भनेको थिए । सडक विस्तार गर्छु भनेको थिए, सवै क्षेत्रमा सडक विस्तार गरेर सडकको स्तरउन्न्ती गर्ने काम पनि गरि रहेका छौ । करकरे चोकबाट मावि करकरे सम्म पक्कि सडक निर्माण गरेका छौ । करकरेमा रिङरोडको आधा काम गरि सकेका छौ । करकरेमा लिफ्ट सिस्टमबाट खानेपानि निर्माण गरेका छौ । जनताले चाहेको र जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्दै आएको छ ।
यति काम गरि रहदा अझ गर्नु बाँकी कामहरु के–के छन् । कहिले पुरा गर्नु हुन्छ ?
वडाले भरर्खर विकासलाई पछ्याएको छ । वडामा धेरै कुराहरु गर्न बाकी रहेका छन् । आधरभूत करारहरु पनि पुरा गर्न सकेका छैनौ । नेपाल सरकारको एक घर एक धारा भन्ने नारा अनुसार सवैको घर घरमा पानीको धारा पु¥याउन बाँकी रहेको छ । पक्कि सडक निर्माण गर्नु पर्नेछ । अवको समयमा पनि अझै केही गर्छु भन्ने लागेको छ । नदि नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ । खोलाहरुमा पुल नहँदा जनताले समस्या झेल्दै आएका स्थानहरुमा पुल निर्माण गर्नुछ । वडामा व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था बनाउनु छ । वडाका सवै विद्यालयहरुलाई सुविधा सम्पन्न पार्दै आधुनिक तथा प्रविधिको प्रयोग गरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु छ । यि लगाएत वडामा अझैपनि विकास निर्माणका धेरै कामहरु गर्नु पर्ने छ । म वडाको विकासमा निरन्तर रुपमा लागि परेको छु । सानो बजेटमा ठुला, ठुला अपेक्षाहरु पुरा गर्नु पर्ने वडाको बाध्यता रहेको छ । कोरोना भाईरसले पनि हामीलाइक्षर्् धेरै पछि पारेको छ । कोरोनाले गर्दा सोचे अनुसार विकास गर्न सकेका छैनौ ।
वडामा गर्नै पर्ने काम छ तर नसकेका त्यस्ता कुनै कामहरु छन् ?
गर्न चाहादा चाहादै पनि गर्न नसकेका कामहरु धेरै छन् । वारि करकरे–पारी करकरे जोड्ने पुल निर्माण गर्न संघिय माननियसंग माग गरेको छु । त्यो पनि अधुरै छ । सडकको डिपिआर भएको छ, निर्माण गर्न बाँकी छ । दुई वटा स्थानमा कमलाा खोलामा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण गर्नु पर्नेछ । ती स्थानमा पुल नहुँदा बर्षायाममा बालबालिकाहरुलाई विद्यालय र घर जान समस्या छ । २ सय घर धुरी अझै पनि सञ्चारको पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् । फोन गर्नु परे डाडामा चड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । सञ्चार पनि अतिआवश्यक हो । जनतालाई संचारको सुविधामा ल्याउन आवश्यक पहल जारी नै छ । कमला नदी नियन्त्रण गर्न मुख्य चुनौती रहेको छ । कमला नदी प्रणली भनेर अन्यन्त्रै काम हुने र माथिल्लो वेल्टमा काम हुन सकेको छैन् । यस वडामा संघिय तथा प्रदेश माननियहरुले संसद कोषको बजेन नै यस वडामा दिनु भएको छैन् । प्रदेश सभाको २०७५÷०७६ मा दुई वटा योजनाको लागि बजेट आएको थियो । त्यस पछि र अघि संघ र प्रदेश सांसदबाट यस वडामा बजेट आएको छैन् । मैले बारम्बार माग गरि रहेको छु तर उहाँहरुले सुनुवाई भएको छैन । उहाँहरुले पनि बजेट दिए वडाको विकास निर्माणमा ठुलो सहयोग मिल्ने थियो । संघिय सांसद हरिबोल गजुरेलबाट झन यस वडामा केही पनि विकास हुन पाएको छैन । उहाँ साझा हुन सकेको देखिदैन ।
वडा अध्यक्ष भएको यतिका समयलाई सम्झदा खुसि हुने कुरा के–के छन् । र सम्झदा दुःख लाग्ने कुराहरु के–के छन् ?
नगरपालिका भएको २३ बर्ष स्म्म बत्ति नवलेको यस वडामा बत्ति बाल्न पाउदा खुसि लागेको छ । स्वास्थ्य, खानेपानी, क्षिा लगाएतमा भएका पहल र प्रयासहरुबाट भएका कामहरु सम्झदा खुसि लाग्ने गर्दछ । वडाका ८० प्रतिशत जनताको खेतबारी कमला नदीको आसपासमा छ । कमला नदी नियन्त्रण गर्न नसक्दा सवै भन्दा धेरै नरमाइलो लाग्ने गर्दछ ।
तपाई नेकपाको नेता पनि हुनुहुन्छ । नेकपाको अहिलेको झगडालाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
म नेकपाको सामान्य तहको कार्यकर्ता हुँ । मेरो बुझाई के छ भने यो अनावश्यक हो । म कुनै पनि गुटमा छैन । हिजो पनि नेकपा एमालेमा नै थिए र आज पनि नेकपाको कार्यकतामा नै छु । गुटले राम्रो पनि गर्दैन् । मलाई के लाग्छ यो माथिको लडाई सवै पदको लडाई हो । एक जनाले पार्टी र अर्को जनाले प्रधानमन्त्री चलाउने गरे हुने । यो विचार र सिद्धान्तको झगडा भन्दा पनि पदको झगडा हो । नेतृत्वले यसो गर्दा इमान्दार कार्यकर्ताको मन विग्रन सक्छ । नेतृत्वले विधि र सिद्धान्तको आधारमा अघि बढे हुने जस्तो लाग्छ ।
तपाई कोरोना संक्रमण पछि मुक्त हुनु भएको छ । कोरोना केही पनि हैन भन्छन् खासमा के रहेछ ?
कोरोनालाई धेरैले केही पनि हैन भन्ने गरेको मैले पनि सुनेको छु । र मलाई भेट्ने धअधिकांशले कोरोना केही पनि हैन भनेर भन्नु हुन्छ । तर कोरोना नलगो सम्म केही हैन लागेपछि चाहि केही हो भन्ने बुझिन्छ । कोरोना संक्रमणले निमोनिया, ज्वरो आउने, खोकि लाग्ने, ज्यान सुक्दै जाने, खानेकुरा खान मन नलाग्ने, स्वाद हराउने जस्तो भयो । शरिरमा अक्सिजन कम हुँदा मानिस मर्न सकिने रहेछ । म १४ दिन टिचिङ्गमा बस्दा २४÷२५ जनाको मृत्यु भएको मैले प्रत्यक्ष देखे । शरिरमा अक्सिजन घट्दै गएपछि आईसियु खोज्नु पर्ने र सहजै नपाउदा मान्छेको मृत्यु हुने गरेको छ । सामान्य व्यक्तिले आइसियु पाउने सम्भावना न्युन हुन्छ । कोरोना बलियो, बलवान छु भन्नेलाई पनि लाग्छ । कोरोनाले आक्रमण गरेपछि मन र शरिर नै गल्छ । कोरोनाको लक्षण देखा परे समयमा नै स्वास्थ्य संस्थामा गएर परिक्षण गराउन आग्रह गर्दछु । किनकी समयमा नै उपचार पाईएन भने मर्ने नै हो । उपचानर पायो भने बाँचिन्छ । म १३ दिन सामान्य वेडमा बस्दा पनि डेढलाख रुपैंया खर्च गरेको छु ।
वडाको विकासमा लागि रहदा कस्ता कस्ता समस्याहरु रहेछन् ?
वडाको विकासमा समस्या भनेको बजेट नै हो । थोरै बजेटबाट धेरै विकास निर्माणका कामहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । बजेट धेरै तिर वितरण गर्नु पर्ने हुँदा विकास प्रभावकारी नदेखिने हुदो रहेछ । वडाको विकासमा बार्षिक ५ करोड रुपैंया आवश्यक पर्ने रहेछ । जस्ले गर्दा विकासका पूर्वाधारहरुमा गरिएको लगानीले विकास र परिवर्तन देखिन्छ । भौगोलीक विकटता रहेकाले बजेटको आकार पनि बढाउनु पर्दछ । ठुलो बजेटले मात्र यहाँका वडा बासिका आधारभुत आवश्यकताहरु पुरा गर्न सकिन्छ ।
सय बर्ष पार गर्दा पनि छैन नागरिकता
२४ भाद्र २०७७, बुधबार ०६:२७0
सिन्धुली जिल्लाको बामपन्थी राजनीतिमा प्रदीप कटुवाल कुनै अपरिचित नाम होइन । निरंकुश पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका क्रममा सिन्धुली जिल्लामा गठन भएको बाम मोर्चामा तत्कालिन नेकपा (माले) का तर्फबाट सदस्यका रुपम
केशव देवकोटाद्धारा केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण २३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७